Jeneraly Ravalomanana:« ZANAKA AVARADRANO MITOVY AMIKO NY FILOHA!” -
AccueilRaharaham-pirenenaJeneraly Ravalomanana:« ZANAKA AVARADRANO MITOVY AMIKO NY FILOHA!”
Niely be tokoa ny feo tato anatin’ny 24 ora fa misy andiana manamboninahitra mikotrika fanonganam-panjakana ka anisan’ny voatonona tamin’izany ny jeneraly Ravalomanana Richard, COMGN teo aloha. Azon’ny mpanao gazety tato amin’ny Triatra an-tariby ity manamboninahitra ambony ity ary nanaiky ny hamaly ireo fanontaniana napetraka taminy.
Triatra (-): Misy fikotrehana fanonganam-panjakana izany amin’izao fotoana izao. Manamboninahitra maromaro no voalaza fa mivory sy manomana azy io ka anisan’izany ianao.
Jeneraly Ravalomanana (+): “Zanaka Avaradrano mitovy amiko ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Tsy izaho velively no ndeha hanongana fitondrana eo am-pelatanan’ny Zanaka Avaradrano. Manaraka izany, tsy “culture”-ko mihitsy ny manongam-panjakana indrindra amin’ny maha manamboninahitra jeneraly ahy ao anivon’ny Zandarimaria. Natao hiaro fanjakana ny Zandarimaria fa tsy natao hanongam-panjakana ary izany no nahatonga ny fanenjehana ahy hoe “pro Ratsiraka talohan’ny taona 2002, pro Ravalomanana nandritra ny fitondrana Ravalomanana ary pro Rajoelina nandritra ny Tetezamita”. Averiko hatrany fa natao hiaro fanjakana ny Zandarimaria. Efa nisy mpanao politika niteny tamiko volana maro lasa hoe ndao harodana ity fitondrana ity dia izao no navaliko azy: “Zanaka Avaradrano mitovy amiko ny filoham-pirenena ka tsy hanao izay mihitsy aho ary tsy izany mihitsy no antom-pisiako ato anivon’ny Zandarimariam-pirenena”. Koa na iza na iza hiteny amiko tsy hiroso amin’izany fanonganam-panjakana izany na oviana ny tenako amin’ny maha manamboninahitra jeneralin’ny Zandarimariam-pirenena ahy”.
(-): Nandray anjara tamina fivoriana miaramila ve ianao?
(+): “Ny fitsenako ny zafikeliko any am-pianarana sy ny fandehanako any am-piangonana isaka alahady ve? Tsy manana zavatra afenina aho ary tsy manam-potoana amina fivoriana hafahafa tahaka izany. Ny fampandrosoana ny tanàna sy ny zanaka ampielezan’Ambohimarina izao no manahirana ahy”
(-): Eto an-toerana ny filohan’ny HAT Andry Rajoelina. Oviana no nihaonanareo farany?
(+): “Efa ela! Tsy nihaona na tafaresaka akory aza tamin’ny filohan’ny Tetezamita intsony aho taorian’ny nandraisan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny fitondrana”.
Tahaka izay ny resaka nifanaovan’ny gazety Triatra an-tariby tamin’ny jeneraly Ravalomanana Richard manodidina ny resaka nandeha tato anatin’ny 24 ora. Vao nahazo ny mari-boninahitra “Grand Officier” moa ny tenany izay nisaorany an’Andriamanitra fa tsara fiafarana ny taona 2016!